ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ လီဗာပူးလ် နိုင်မှာလား? လီဗာပူးလ် – နောဝှစ်ချ် (ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်)၊ - Khit Lunge
ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွင့်ပွဲစဉ်မှာ လီဗာပူးလ် နိုင်မှာလား? လီဗာပူးလ် – နောဝှစ်ချ် (ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်)၊
အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ ရပ်ဝန်းကတော့ လီဗာပူးလ်အသင်း နဲ့ နောဝှစ်ချ်အသင်းတို့ စတင်ကစားမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် (၁)၊ အဖွင့်ပွဲစဉ်နဲ့ တာထွက်တော့မှာပါ။
လီဗာပူးလ်အသင်း နဲ့ နောဝှစ်ချ်အသင်းတို့ဟာ ယနေ့ည၊ စနေနေ့နံနက် (၁:၃၀) အချိန်မှာ ကစားကြမှာ ဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ VAR ကို ပထမဆုံး အသုံးပြုတဲ့ ပွဲစဉ်အဖြစ် သမိုင်းဝင်သွားမယ့် ပွဲပါ။
ကွင်းလယ်ဒိုင်အနေနဲ့ မိုက်ကယ် အိုလီဗာက တာဝန်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်း အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ ကစားသွားကြမှာပါ။ ဒီနှစ်သင်းရဲ့ နောက်ဆုံး (၅) ကြိမ် တွေ့ဆုံမှုမှာ လီဗာပူးလ်အသင်းက ရှုံးပွဲမရှိဘဲ (၄) ပွဲနိုင်၊ (၁) ပွဲသရေ ဆိုတဲ့ ရလဒ်ကို စွမ်းဆောင်ထားပါတယ်။
ဒီတော့ နောဝှစ်ချ်တို့ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ နောက်ဆုံး တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ (၅) ကြိမ်မှာ နိုင်ပွဲ မရှိခဲ့ဘဲ (၄) ပွဲရှုံးပြီး (၁) ပွဲသရေကျခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း သူတို့နှစ်သင်း နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၀၁၆) ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး (၃) နှစ်အကြာမှာ ပြန်လည် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှု ဖြစ်ပါတယ်။
နော်ဝှစ်ချ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံရှစ်ကနေ ပြန်ပြီးတက်လာတဲ့ နှစ်မှာပဲ လက်ရှိ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်စွဲအသင်း လီဗာပူးလ်နဲ့ ကစားရမှာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ ကာလရှည် ဝေးကွာခဲ့ရတဲ့ နော်ဝှစ်အသင်းအတွက်တော့ ဒီပွဲစဉ်ဟာ ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။
တစ်ဖက်က လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ် (၃၈) ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခံစစ်ပိုင်းမှာ တောင့်တင်းတဲ့ အသင်းပါပဲ။
ဒီည ကစားမယ့် ပွဲစဉ်မှာသာ မာနေး ပြန်လည် ပါဝင်လာမယ်ဆိုရင် တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ မြင်နေကျ (၃) ယောက်တွဲ၊ မာနေး၊ ဆာလတ် နဲ့ ဖာမင်နိုတို့ အတွဲကို မြင်ရအုံးမှာပါ။ နည်းပြကလော့ပ်က ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မာနေး ပါဝင်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဆိုခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဒီပွဲစဉ်ဟာ အဖွင့်ပွဲ၊ ပွဲစဉ် (၁)၊ VAR ကို ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းမှာ ပထမဆုံး အသုံးပြုမယ့် ပွဲ၊ မို့လို့ ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေ စိတ်လှုပ်ရှား ကြသလို ကစားသမားတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမယ့် ပွဲစဉ်ပါ။
ဒီပွဲစဉ်ဟာ အားလုံးအမြင်မှာတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ ပွဲစဉ်ပါ။ လီဗာပူးလ်တို့ သူတို့ရဲ့ အိမ်ကွင်း၊ အန်ဖီးလ်ကွင်းမှာ အနိုင်ရမယ့် ပွဲစဉ်ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ကရော ဘယ်အသင်း အနိုင်ရမယ်လို့ ထင်လဲ။
ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲ ရှာဖွေနိုင် ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်4–0ချဲလ်ဆီး ပွဲစဉ်မှ နှစ်ဖက် ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များ